२०७४ असार १९ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले कार्य क्षमता मुल्याङनको आधारमा विभिन्न कर्मचारीहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरेको छ । वरिष्ठ निर्देशकहरुमा प्राविधिक तर्फ आनन्दराज खनाल र प्रशासन तर्फ पुरुसोत्तम खनाललाई सिफारिस गरिएको छ । दुवै जना लामो समयदेखि प्राधिकरणको निर्देशक पदमा रहेर काम गर्दै आएका कर्मचारी हुन् । ... बाँकी अंश»
जनप्रतिनिधिलाई निजी क्षेत्रको 'नाईट डिनर' अफर ! के होला असली नियत ?
२०७४ असार १९ सोमबार, काठमाडौं । आईतबार कार्यालय प्रवेश गर्ने वित्तिकै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको हातमा होटल एशोसिएसन नेपालको एउटा पत्र पर्यो । पत्रमा लेखिएको व्यहोरा हेरेपछि उनी एकाएक आक्रोशित बन्न पुगे । 'यी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुलाई यसरी भ्रष्ट बनाउछन् ।' उनले आक्रोशित हुँदै थपे । पत्रमा खासै अरु केही पनि लेखिएको थिएन । त्यसमा मात्रै असार २३ गते लाजिम्पाट स्थित शंकर होटलमा साँझ ५ बजे पछिको लागि जनप्रतिनिधिको सम्मान तथा रात्रिभोजको निम्ता गरिएको थियो । उनले जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नको लागि दिउँसो नभएर राती नै किन कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ ? भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले पाँचबजे कार्यक्रम राख्नुको अर्थ सम्मान गर्ने भन्दा पनि अर्कै रहेको बताए । ... बाँकी अंश»
गाउँपालिकामा बैंकमार्फत वित्तीय गतिविधि बढाइनेः गभर्नर नेपाल
२०७४ असार १८ आइतबार, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकको नयाँ संरचना अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंक स्थापना गरी वित्तीय गतिविधि बढाउने योजना रहेको बताएका छन्। सिभिल बैंक लिमिटेडले हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी र युनिक फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ती गरेपछिको ... बाँकी अंश»
राजस्व सङ्कलन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न चेम्बरको माग
२०७४ असार १८ आइतबार, काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राजस्व सङ्कलन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ। चेम्बरका प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ व्यवसाय’ हुनुपर्नेबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। ... बाँकी अंश»
पेट्रोलियम पदार्थ सस्तियो
२०७४ असार १८ आइतबार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मुल्य घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य घटेपछि प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको निगमले जनाएको छ । नेपालमा कारोबार गर्दै आएको इण्डियन आयल कार्पोरेसन (आइओसी)ले नेपालमा पनि सबै जसो इन्धनको मुल्य घटाएर पठाएकाले नेपाल आयल निगमले पनि इन्धनको मुल्य घटाएको हो । ... बाँकी अंश»
विद्यासुन्दरमाथि राजश्व दृष्टि : फिल्म हल व्यवसायीलाई ल्याउन सक्लान् करको दायरामा ?
२०७४ असार १८ आइतबार, काठमाडौं । २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई स्वागत गरेको चालू आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन तर्फ केही सुखद् समाचार त सुनाएको छ । महानगरले उठाउने करको अधिकांश शीर्षकमा आफूले लिएको लक्ष्यलाई एक महिना अगाडि नै पूरा गरिसकेको महानगरको कर्मचारी प्रशासनले केही शीर्षकमा उठाईने रकमको लागि भने जनप्रतिनिधिहरुलाई नै कुरेर बस्नु परेको छ । ... बाँकी अंश»
सहकारीसँग सहकार्य नगरी समृद्धि सम्भव छैन : अर्थमन्त्री कार्की
२०७४ असार १७ शनिबार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि सरकार, निजि र सहकारीले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. नेपालले ९५ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा शनिवार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री कार्कीले सहकारी मोडेलमार्फत दिगो विकासका लागि सरकारले सहकार्य गर्ने बताए । ... बाँकी अंश»
काठमाडौँ उपत्यका अन्धकारको खतराबाट जोगियो, धादिङमा भाँसिएको टावर निर्माण
२०७४ असार १७ शनिबार, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको एक तिहाई भन्दा बढी स्थानमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने गरी धादिङमा भाँसिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली पुनः निर्माण गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
जीएसटी प्रभाव : भारतमा भटाभट घटाईँदै कार र मोटरसाईकलको मूल्य
२०७४ असार १७ शनिबार, काठमाडौं । भारतमा शुक्रबार रातीदेखि जीएसटी प्रणाली लागू भएपछि कार तथा मोटरसाईकलको भाउ घटेको छ । मोटरसार्इकल तर्फ साधारण मोटरसाईकलमा घाउ घटेको भएपनि हाइब्रिड्स तथा ३५० सीसी भन्दा माथिका इन्जिनवाला ठूला मोटरसाईकलहरुमा भने शुल्क बढेको छ । शुक्रबार भारत सरकारले सुरु गरेको जीएसटी प्रणालीले ३५० सीसी भन्दा माथिको मोटरसाईकलमा कर बढाएको थियो । ... बाँकी अंश»
भारतको जीएसटी प्रणालीले के-के सामान हुने भयो महंगो ? (सूची सहित)
२०७४ असार १७ शनिबार, काठमाडौं । भारतमा शुक्रकार आधिरातदेखि सुरु भएको बस्तु तथा सेवामा समान कर सिस्टमले नेपालमा पनि महंगी बढाउने भएको छ । समान दरमा कर लगाउँदा करमा सहुलियत पाएका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुसँगै अधिकांश विलासी बस्तुहरुमा समेत महंगी बढ्ने भारतीय स१चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । अब नेपालमा आयात गरिँदै आएका विभिन्न बस्तुहरुमा नेपाललीले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ... बाँकी अंश»
दा‌‌ङका व्यवसायीको शोक कार्यक्रम, तीनदिन व्यवसाय नगर्ने
२०७४ असार १६ शुक्रबार, दाङ । दाङका व्यवसायीहरुले व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठको हत्याको विरोधमा तीन दिन शोक मनाउने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार श्रेष्ठको शव सल्यानको घना जंगलमा भेटिएको खबर आएपछि व्यवसायीहरुको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तुल्सीपुरका व्यवसायी श्रेष्ठलाई समूहले झण्डै एक महिना अगाडि अपहरण गरेको थियो । ... बाँकी अंश»
विमानस्थल भन्सारमा जोडियो 'तस्करी रोक्ने मेसिन'
२०७४ असार १५ बिहिबार, काठमाडौं । ''नेपालको भन्सार यस्तै हो'' भनेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कुनैपनि सामान नेपाल ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? याद गर्नुस् ! अहिलेको विमानस्थल भन्सार पहिलेको जस्तो कर्मचारीको भरोसामा चल्ने अड्डामा सीमित छैन । यो पनि अन्यत्रको जस्तै प्रविधिमैत्री बन्नेबाटोमा धेरै खुड्किलो चढिरकेको छ । परम्परागत ढर्राबाट चल्ने भन्सार सम्झिएर त्यस्ता समान ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई भन्सारका कर्मचारीहरुले सीधै कारबाही या सीधै प्रहरीको जिम्मा पनि लगाईदिन सक्छन् । ... बाँकी अंश»
एनसेलले ल्यायो ‘सबैलाई उपहार हरेक दिन लगातार’ अफर
२०७४ असार १३ मंगलबार, काठमाडौं। एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले अब हरेक दिन आकर्षक उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि ‘सबैलाई उपहार हरेक दिन लगातार’ योजना ल्याएको छ, जस अन्र्तगत एनसेलका ग्राहकले अब ३० दिनसम्म हरेक दिन आकर्षक बोनस उपहारहरु पाउनेछन्। ... बाँकी अंश»
कर फर्छ्यौट आयोगको कुनै औचित्य छैनः पूर्व महानिर्देशक अरबिन्दकुमार
२०७४ असार १३ मंगलबार, काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसको नेता डा.रामशरण महतले कर फस्र्यौटको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंको बागबजारस्थित होटेल हार्दिकमा आर्थिक पत्रकार मञ्च–नेपालले आयोजना गरेको ‘कर फस्र्यौट आयोगः समस्या कि समाधान ?’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै डा.महतले यस्तो बताएका हन्। ... बाँकी अंश»
चितवनमा अनुगमन टोलीद्वारा पाँच व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द
२०७४ असार १२ सोमबार, चितवन। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले चितवनका पाँच व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द गराएको छ । बिभागका शाखा अधिकृत ढुन्डिराज पोखरेलको नेतृत्वमा आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तीर्थ महर्जनसहितको टोलीले सोमबार चितवन जिल्लाका बजार अनुगमन गरी रामनगरको न्यु शिवशक्ति होटल, सुस्मा होटल, नारायणगढको शर्मा आइसक्रिम, आनन्दमार्गको ओम सत्य साई गल्ला पसल र श्री ट्रेडर्सको कारोबार रोक्का गरेको शाखा अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
२०७४ असार १२ सोमबार, सुर्खेत । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनावलगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताए। ... बाँकी अंश»
नेपालको पर्यटन विकास प्रभावकारी हुन सकेन, डेढ वर्षदेखि पर्यटन परिषद्को बैठक नै बसेन
२०७४ असार १२ सोमबार, काठमाडौँ । समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने ‘राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्’ को वैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । ... बाँकी अंश»
थपियो क्रेजी सेल मेलाको अवधि, असार १७ सम्म चल्ने
२०७४ असार ११ आइतबार, काठमाडौं । शिखर सुजको आयोजनामा भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी स्थलमा भईरहेको क्रेजी सेल मेला यहि असार १७ गतेसम्म चल्ने भएको छ । यस मेलामा उपभोक्ताले सस्तो मुल्यमा आर्कषक जुत्ता चप्पल पाउने हुँदा ग्राहकको मागलाई ध्यानमा मेलाको समयावधि ६ दिन थप गरिएको आयोजकले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
९६ हजार वर्ग किमी क्षेत्रफलमा खनिजको सम्भावना
२०७४ असार १० शनिबार, काठमाडौँ । नेपालमा ९६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खनिज भेटिने सम्भावना देखिएको छ । खानी तथा भू–गर्भ विभागले गरेको अध्ययनमा नेपालका पहाडी, मध्यपहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रमा खनिजको सम्भावना रहेको जनाएको हो । ... बाँकी अंश»
प्रचण्डले कुलमानलाई घरमा बोलाएर भने –सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ हटाइदिनुस्
२०७४ असार १० शनिबार, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई घरैमा बोलाएर सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । ... बाँकी अंश»